Zonke Izinto Nge-Trenbolone Inanthate Powder | AASraw
/Blog/Ithala/Zonke Izinto Nge-Trenbolone Inanthate Powder
ezaposwa ngomhla 02 / 20 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
Ngaba ucinga ukubandakanya ezinye i-steroids ezinamandla kwi-bodybuilding regime? Ewe, i-Trenbolone enanthate powder ingaba yindlela yokuhamba nayo. Khangela iinkalo ezibalulekileyo zeziyobisi, izibonelelo zayo, iziphumo zecala, kunye nendlela yokuthenga.
Trenbolone Enanthate imbali
Ekuqaleni, i-Trenbolone yayisisidakamizwa somlomo wezilwanyana ekuphuculeni iifumfucu kwi inkomo. Kwaqala kuqala phakathi kwe-60s ngeNkampani yaseJamani, iHoechst-Roussel. Abavelisi bafaka imveliso yabo yezilwanyana, uFinajet. Ngelo xesha, i-Trenbolone enanthate powder yayingumxholo wophando eLos Angeles kwiYunivesithi yaseCalifornia.
Ukuveliswa kweTren Ace eJalimane kwathandwa ngokukhawuleza kwithuba elithile kuze kube yilapho kuphele ukuphela kwe-80. Kwiminyaka emibini kamva, esinye isityalo seFransi sakhupha nge-humanbolone hexahydrobenzylcarbonate (iParabolan) phantsi kwegama legama, i-Negma. Ngelishwa, le nto yayingekho mthethweni kwi-1997.
Ekugqibeleni, i-Trenbolone enanthate yabonakala ebonakalayo njengemveliso emele kwi-2004 nge-label label, i-trenabol. Inkampani yaseBritani Dragon yenza i-steroid njengomkhiqizo weebhanki wangaphantsi komhlaba. Nangona i-corporation yaphuma kwishishini kwi-2006, uphawu lwalo luyafumaneka nakwiimarike ezimnyama.
Nangona i-Tren iphindwe kabini njenge-pharma kunye neyeza le-vet grade, iTren E kunye Parabolan ngokuchanekileyo ukusetyenziswa kwabantu.
Yintoni i-Trenbolone Enanthate Powder?
Trenbolone enanthate yinto yokwenziwa komxholo kunye neCAS akukho 10161-35-8. Yinto ebonakalayo, ebonisa zombini i-anabolic kunye neempawu ze-androgenic. I-Tren E powder yi-C17β enanthate ester, kwaye ivela kwi-nandrolone (i-19-nortestosterone).
NjengoC deca Durabolin, uTren akanakho i-athomu ye-carbon kwi-19th isikhundla sakhe. Nangona kunjalo, isakhiwo esicacileyo sekhampani sibonisa ukubophelwa kabini kwekhabhoni zombini kwiindawo ze-9th kunye ne-11th.
Kukho iintlobo ezintathu zeTrenbolone ezithengiswayo, kwaye ndiza kuchaza indlela ezahlukileyo ngayo. Ipropati yomzimba phakathi kwezi zinto ziyi-chemical and setup. Nangona kunjalo, i-attachment ye-ester ekwabahlula.
I-Esters ilawula umsebenzi wokukhululwa kwe-trenbolone hormone ngaphakathi komzimba. Uthelekiso olukhawulezayo phakathi i-trenbolone acetate kunye ne-enanthate ester ibonisa ukuba lo mva unesiqingatha-sobomi kwaye usenza ngokukhawuleza kunokuba ngaphambili. Kwi-Tren E, i-esanthate ester i-17-beta-hydroxyl yesakhiwo sayo. Isiseko seTrenbolone sisinye isantlukwano, nangona singekho ester.
Ukusetyenziswa kwinqununu ye-Trenbolone enanthate powder kwindlela yokwenza i-anabolic steroids. Unokwethenjelwa kwaye amahlanu anamandla ngaphezu kwe testosterone. Okubalulekileyo, kuthetha ukuba ukuba uthatha kuphela i-200mg ye-Tren E, iziphumo kunye neziphumo ziya kubambisana nomnye umsebenzisi oye wachitha i-1000mg ye-testosterone
Isilinganiselo se-Anabolic 500 100
Androgenic 500 100
I-Trenbolone Enanthate neTrenbolone Acetate
Ezi zimbini ze-steroids ziphantse zifana, kodwa umahluko uvela ngokwemigangatho yokusebenza kunye nejubane lezenzo. Ukunyusa kunye ne-excretion rate yeTren A ikhawuleza ngakumbi kunomlingani wayo, ngoko ke, i-shorter trenbolone acetate ubomi besiqingatha. Ngenxa yesi sizathu, umzimba wakho uya kubhalisa i-trenbolone enanthate enokuphumela kwimiphumo.
Inzuzo ephambili yeTren E kukuba ineziphumo ezimbalwa zecala. Ukuba awunayo indawo elithambileyo yokunciphisa inaliti, ke le yindlela yokuhamba. Emva kwakho konke, umyinge uphindwe kabini ngeveki ngelixa i-Tren Ace idinga intsholongwane yentsuku yosuku.
I-tanbolone enanthate ifanelekile kwi-steroids ye-body building emva kokuba i-newbies inokufumana kunzima ukugcina okanye ukuzinzisa amazinga egazi. Kugqwesileyo kulabo abajikelezayo.
Yintoni i-Trenbolone Inanthate Powder eSebenzisiweyo?
I-trenbolone powder iyona isithako esisisiseko ekuveliseni i-trenbolone enanthate injection. I-compound compound yenzelwa ukusetyenziswa kweeklinikhi.
I-Tren E yintsimi ekwakheni imisipha, ukukhuliswa komzimba, nokuphucula ukusebenza bakha umzimba okanye abadlali. Ngaloo steroid, unako ukwandisa ubunzima besisundu ngaphandle kokufumana amanqatha omzimba angadingekile. Ubuncinane, phakathi kwezilwanyana ezimbalwa onokuzibeka ngexesha lokunquma kunye nokukhupha.
Ngaphandle kokuba ngu-designer steroid, i-Trenbolone E powder yinto ebalulekileyo abaphandi nabaphengululi basebenzisa uphando lwezenzululwazi. Inemilinganiselo ethile yekliniki, ngakumbi xa ifumana iziyobisi, ezinokujongana nokulahleka kwemisipha phakathi kwezigulane ezigugile.
Umsebenzi we-Trenbolone u-Ananthate Work?
Ukutshatyalaliswa kunye ne-metabolism ye-Trenbolone enanthate yenzeka kwisibindi. Isilwanyana sinobudlelwane obuphezulu kumaseli e-androgen e-receptor, ejongene nempawu zesini zesibini zesini. Ekubeni kungabonakali kwi-estrogen, i-steroid ikhokelela ekufumaneni inzuzo ye-muscle.
Ukuba khona kwe-Tren E emzimbeni kwandisa ukungena kwe-ion i-ammonium ngeentlungu kunye nophuculo olulandelayo kwi-protein synthesis. Naphezu kokusebenza kwiisisu ezinama-muscular, le steroid ivuselela ukutya kwaye inciphisa izinga le-catabolism okanye iimeko zokuchithwa kwemisipha. Ngaphandle kokubophelela kwi-AR, i-compound idibanisa neeseli ezinamafutha, ngoko ke, ukuququzelela i-lipolysis.
Ngethuba ngeliphi iinjongo, i-Tren ayinayo nayiphi na indlela yokuguqulwa kwaye ayifuni. Ngenxa yesi sizathu, isichengiselwano asinayo imiphumo emibi kwi-urinal system. Ukuxhaswa kukudlulela kumchamo.
Trenbolone Inanthate Half ubomi
I-trenbolone enanthate ine-half-life between 8 kwii-12 iintsuku. Ukuba u-ester ende, i-Trenbolone Enanthate yenza kancane kancane emzimbeni ngokulinganisela kokunciphisa. Ngako oko, lihlala kwinkqubo yabantu malunga neentsuku ezimbalwa ngaphambi kokuphuma.
I-Trenbolone Inanthate Ihlala Kangakanani KwiNkqubo Yakho?
Ukuba ufumanisa isigamu-ubomi se-anabolic steroid, kuba lula ukuqikelela inani lexesha eli liza lihlala kule nkqubo. Eli xesha liyaziwa ngokuba lixesha lokufumana.
Xa uqhuba uvavanyo lwe-steroid, i-Trenbolone Enanthate iya kubonisa iinyanga ezintlanu emva kokuba uphume komjikelezo we-tren. Isizathu kukuba i-metabolism yayo ivela kwizinga lomkhonto. Ngaphandle koko, into yokuba le ngqungquthela ibonisa i-ester ende kwaye ifakwe injectable inegalelo ekulibazisekeni kwigazi.
Ukuba uthabatha umva emva kweenyanga ezintlanu, isampuli iya kuba yinto embi. Nangona kunjalo, umele ubeke ingqalelo ukuba ezinye i-steroids uza kuba yi-stacking kwisigidi se-trenki ziya kuthintela ixesha lokufumana. Njengangoku, akukho doping case kwimeko yabadlali bezemidlalo malunga nokusetyenziswa kweTrenbolone.
Ziziphi iiNzuzo zeTrenbolone Enanthate?
Imfihlelo yokuzuza kuyo anabolic steroids kukulandela izilumkiso. Kufuneka uqonde kwaye ulinganise ingozi phambi kokuba uqale umjikelezo. Ukuzonwabisa i-trenbolone enanthate, qi ni sekise ukuba usebenze rhoqo ngelixa ugcina ukutya okungekho khalori.
Nantsi into enokuyilindela kwi-tren:
Ukuhlanganiswa kwamaprotheni kuseloko kufanelana nobukhulu bemisipha emzimbeni. Ukuphakama kwesantya sawo, izihlunu ezithe xa uhlala nazo. Ingakumbi, iiprotheni zikhusela izicubu ezikhoyo kwaye zikhawuleza iinkqubo zokubuyisela.
-Iimpahla zoMzimba eziMzimba
Ngenxa yeempawu eziphezulu ze-androgenic ze-steroid, umzimba wakho uya kuphendula ekukhuleni okukhawulezileyo kwemisipha.
I-Trenbolone ikhulisa inani leeseli ezibomvu zegazi, ngaloo ndlela, ukwenza ukuba bakwazi ukuthutha izondlo kunye ne-oksijini. Ubuninzi be-oxygenation bulingana namanqanaba aphezulu.
Njengoko uphakamisa izixhobo zakho ezinzima okanye usebenze ngamandla, awuyi kuzinxiba. Umzimba uya kuvuselela kwaye uqinisekise ukunyamezela kunye nokuqina.
-Ukuxhobisa amandla kunye nokuSebenza
Ekupheleni kweeveki ezintathu ukuya kwezine kumjikelezo we-trenbolone, qiniseka ukuba ubhalise ukwanda kwamandla. Isizathu kukuba isilwanyana siphucula amandla akho, sinciphisa ixesha lokubuyisela, kwaye siphucula ukunyamezela. I-Powerlifters ngokuqinisekileyo iya kuhlenga malunga nale nzuzo.
-Ikhokelela ekugcinweni kwe-nitrojeni
I-nitrojeni igcina iphinde ikhuthaze i-anabolism, ngoko ke, ukuqala ukuvelisa iiprotheni kwimisipha. Le nkqubo inoxanduva lokukhula kwemisipha. Ngaphandle koko, njengokuba umzimba uthatha i-anabolic state, le nkunkuma igweba ukukhahlazeka kunye nezinto ezinxulumene nemisipha.
Izicubu zomzimba ziqukethe i-16% ye-nitrogen. Ukuba nje ugcina le xabiso, uya kuhlala u-anabolic.
I-Trenbolone Enanthate iphakathi kwezinto ezimbalwa ze-anabolic steroids, ezingabonakali kwi-estrogen. Ngako oko, awukwazi ukufumana iimpawu ezinjengezibhinqa xa zikhona.
Yintoni eyenza i-steroids ukuguqula kwi-estrogen ngokukhawuleza kukukho kwe-athomu ye-carbon kwi-19th isikhundla. Kwiimveliso ze-19-nortestosterone, i-hydrogen ithatha i-athomu ze-carbon.
Ngomjikelezo omnye, unokufumana iiplani ezingama-20. Ngokungafani neninzi ye-steroids enokuzuza ngenxa yobunzima bamanzi, i-Tren E ikhulisa ukukhula kwemisipha ngexesha ngelixa elivuthayo amafutha omzimba.
I-steroid ibangela ukukhula okufana ne-insulin-1 (IGF-1). Le hormone yeprotheni isebenza ukuvuselela umzimba kwaye isebenzise iiseli, iigaments, izicubu zomzimba, i-cartilage kunye namathambo.
Ukuba unomjikelezo wokusika, into yokugqibela ofuna ukuyiqokelela ngamafutha omzimba. I-Glucocorticoids iyanciphisa ukukhula komzimba kunye nokukhawuleza ukuzuza ubunzima. I-Trenbolone E isebenza ngokubetha kwi-cortisol.
Ngenxa yokunyuka kweeseli ezibomvu zegazi, umzimba wakho unako ukwandisa zonke izondlo ozidlayo ngokungafaniyo nendlela okwenze ngayo ngaphambi kokuba ube kwi-steroid. Ubuncinane, umzimba wakho unakho ukuphendula i-milligram yeprotheni, iivithamini, amafutha kunye ne-carbohydrate.
Ukondla kokutya ngenye yeenzuzo ezibalulekileyo ze-trenbolone enanthate ezingaphezu kwamanye ama-steroids.
-Bambalwa Inaliti Iimpawu
Ngo-Tren E, uya kukhanda nje imisipha yakho kabini ngeveki. Ewe, le nkcukacha ziindaba ezilungileyo kubafana be-trypanophobic.
-Ayikho isetyhi kwi-Ints
Ininzi, i-anabolic steroids yomlomo iyinkxalabo ye-hepatoxicity. Ukuba yipilisi ejoyiweyo, i-Trenbolone iya kugwema ukudlula kwisibindi ngelixa i-pharmacokinetics yayo. Ukuba kwenzeka ukuba ube neengxaki zesibindi ngelixa u-tren, kufuneka ubeke ityala kwi-stroid.
Ukuba awuqinisekanga malunga noko ukulindela ngethuba ngexesha lomjikelezo wokusika, nasi isicatshulwa samahhala. I-Trenabol izokukunceda utshise amafutha kunye neekhalori. Ngokomyinge, ungalahlekelwa kukufutshane ne-1% yesisindo somzimba wakho emva kwesigaba.
-Iyancipha ixesha lokubuyisela
Ngo-Tren E, unokwenza usebenziso olunzulu lwamaqela kodwa ufumana amandla okuqhubeka.
I-Trenbolone Inanthate Cycle
Oqhelekileyo Umjikelezo weTrenbolone ihlala kwiiveki ezisibhozo, kodwa abasebenzisi abaphambili bangenza iiveki ze-12. Isakhiwo esisimangalisa kakhulu se-Trenbolone enanthate kukuba ungayifakela nayiphi na enye i-AAS. Unokwenza ukuxakisha ukunciphisa imiphumo kunye nokukhuthaza ukusebenza kwe-steroid.
Qinisekisa ukufaka i-testosterone kwixesha elidlulileyo kunye nezigaba zokusika njengoko kunceda ukulinganisa i-hormone ye testosterone emzimbeni ngexesha le-PCT. Kubabasebenzisi bexesha elide, ukunqumla i-Dianabol okanye i-Anadrol kuya kuba nefuthe elihle kwimpumelelo yakho. Nangona kunjalo, qiniseka ukuba unciphise umlinganiselo wee-compounds ezixhamlekileyo ukuze ungazibi nakakhulu kwimiphumo emibi.
Ukuba uxakeka ngaphakathi komjikelo we-Tren E, ndincoma i-Primobolan, i-Masteron ne-Halotestin. Winstrol, i-testosterone enanthate powder, kunye no-Anavar batyebile kakuhle nge-tren in the cycle.
Ekupheleni kwesigaba seTrenbolone, kufuneka uzinikezele kwiiveki ezine ezizayo kwi-post cycle cycle (PCT). Ukungaphumeleli ukwenza oko kuya kunciphisa amanqanaba e testosterone, kuphazamise ukudakumba, kwaye kukubi nakakhulu, ukulahlekelwa yonke imisipha yomzimba. Ezinye zePCT ezongezelelweyo ukuqwalasela yiNolvadex kunye neComomid.
Nasi umzekelo wesigxina esiphezulu se-Trenbolone umququzelelo wokubamba ngokufanelekileyo;
Iveki Trenbolone Enanthate Testosterone Enanthate Winstrol
1-7 400mg / iveki 750mg / iveki -
8-12 400mg / iveki 750mg / iveki 50mg / eod (yonke imihla)
Iveki Trenbolone Enanthate Testosterone Propionate Primobolan
1-10 400mg / iveki 200mg / eod 600mg / iveki
I-Cycle Advanced Bulking Cycle
Iveki Trenbolone Enanthate Testosterone Enanthate Anavar Primobolan
1-10 400mg / iveki 1000mg / iveki 90mg / iveki 600mg / iveki
11-12 - 1000mg / iveki 90mg / iveki -
13-14 - - 90mg / iveki -
Ngokukhawuleza emva kokuba uhamba nomjikelezo we-Trenbolone, unokuqiniseka ukuthatha i-50mg ye-Clomid ngosuku. Kufuneka uqhubeke ne dose kwiintsuku ezilandelayo ze-21. Ngelo xesha, qinisekisa ukulawula i-20 - 40mg ye-Nolvadex iintsuku ezilishumi.
I-Trenbolone Inanthate Isilinganisi
I-tanbolone enanthate ifumaneka kwiifom ezingenayo. Umlinganiselo we-Trenbolone enanthate umthamo uphakathi kwe-75mg ukuya kwi-100mg, okufuneka uyenze kabini ngeveki ngokusebenzisa ukujola kwe-muscle okanye umlenze. Olu lingano lithetha ukuba i-dosing yeveki iwa kwi-150mg ukuya kwi-200mg.
Kwababambiseneli, unokwenza phakathi kwe-200 - 400mg / ngeveki kungakhathaliseki ukuba umnqweno uyakunqumla, ukukhwaza okanye ukufumana amandla.
Nangona i-75 - 100mg iya kusebenza ngomlingo, abasebenzisi abaphambili bangathatha ubuninzi be-400mg kwimizi enye. Ukuba ifayitha yakho idlula le xabiso, iziphumo ze-trenbolone enanthate ziza kuphuma kweli hlabathi. Nangona kunjalo, ekupheleni kwayo yonke, uya kufuneka ufumane ngisho nemiphumo emibi.
Tren E powder Akucebisi ukusetyenziswa kunye nabasetyhini. Isizathu kukuba le nkunkuma ibonisa iimpawu ezingqinileyo kunye ne-orrogenic, ezingenakugqithisa kakuhle nge-balance hormonal female. Thatha, umzekelo; Ukusetyenziswa kwemveliso kungenzeka ngezibonakaliso ezifana neklasi ehlanganisiwe.
Esi sidakamizwa sinamandla kubaqalayo kunye nabasebenzisi abaphakathi be-steroid. Ukuba kaninzi ama-anabolic ngaphezu kwe-testosterone, i-Trenbolone ifanelekile kubabenzi bomzimba abanzima. Ukuba uqala, kufuneka uqaphele iikhathalo ezizodwa Aasraw i-trenbolone i-acetate powder.
Imiphumo emibi ye-steroids yomzimba ixhomekeka kwizinto ezimbalwa. Umzekelo, ukuphakama umyinge, umzimba wakho ulungelelaniso kwiimpawu. Ngaphandle koko, abantu bahluke. Indoda yomntu oyedwa ingaba yimbi yetshefu, uyazi.
Umbala wesimo somntu
Ukungazinzanga nokuphazamisa ukulala
Ukwandiswa kwengcinezelo yegazi
Ukukhupha okukhulu ebusuku
Amanqanaba aphantsi ka testosterone
Ukwandiswa kweprostate (benign prostatic hyperplasia)
Ukukhula okungavamile kweenwele
Izingozi ze-gynecomastia ngenxa yeprolactin
Indlela Yokugwema Trenbolone Inanthate Side Effects
Ezinye zezi ngasentla ziphumo zihamba kakuhle. Thabatha, umzekelo, ukuba ufuzisela iimpawu ezinjenge-androgenic ezifana ne-acne okanye i-pattern baldness yamadoda, kufuneka ubalekele ukuthatha i-steroid.
Xa uvakalelwa kakhulu, qiniseka ukuba uphuze amanzi amaninzi ukuze uzigcine unamanzi. Ekupheleni komjikelo we-tren, qiniseka ukuba unayo PCT ukukhaba kuqalise amanqanaba e testosterone.
Kwiindawo ezininzi zokufika ekhaya, i-testosterone ifanele ibe yinxalenye yepaki yakho. Isizathu kukuba i-Trenbolone nganye iya kugqiba ukuxinzelela imveliso yendalo ye testosterone.
Ndingawuthengephi i-steroids yokuvuselela umzimba?
Ukuba ungumcebisi ekwakheni umzimba, amathuba, umbuzo wakho wokuqala uhamba ngathi, "Ndingayithenga phi i-steroids yokwakha umzimba xa kungekho mthethweni?"
Thatha umoya okhulu kwaye ufunde phambili ngenxa yokuba siqhekeze isiqwenga.
-Ukuthenga i-Trenbolone Enanthate
Kwiindawo ezininzi, i-Trenbolone ukuthengiswa kunye neziphumo zayo azikho mthethweni. Ukuveliswa kunye nokuthengwa kwe-steroid akusetyenziswanga kokusetyenziswa kwezilwanyana kunye neekliniki. Ngoko ke, ukuba ufuna ukuyalela enye ye-steroid yakho yokwakha umzimba, kufuneka usebenzise emarike emnyama.
E-US, umzekelo, i-FDA ithathe iplagi kwimveliso, ekusebenziseni, kunye nobunini beet. Kule mingcipheko, unokwemvelo unokugqiba ukuba akukho nkampani yezobisi e-United States inemvume ye-FDA yokwenza le steroid. Nangona kunjalo, ukuba kufuneka wenze ukungeniswa kwezomthetho, qiniseka ukuba ungumlindi wezilwanyana okanye umphandi wezesayensi.
Nangona i-Tren E engekho mthethweni e-US, e-UK, e-Australia naseKhanada, amaninzi amazwe aseMbindi-mpuma kunye ne-Afrika awanikekanga ukulawula ukusetyenziswa kwayo. ECanada, liyiShedyuli yeSetyhi ye-IV phantsi koMthetho oLawulayo. Unokusebenzisa ithuba lokujonga i-trenbolone i-acetate powder-providers njenge-www.aasraw.com.
Ngokungafani nezinye iinguqu ezimbini ze-trenbolone, uTren E kunzima ukufumana. Nangona kunjalo, unako ukhetho kwiinkampani ezisekelwe kwi-intanethi okanye umthombo we-steroid evela kumthengisi wendawo yokuzivocavoca. Ngayiphi na indlela, qinisekisa ukuba uvavanye umvelaphi wabo ukuze ungabi yixhoba lemikhiqizo engamanga kunye nokungaqiniseki.
-Trenbolone Inanthate Price
Ixabiso le-tanbolone enanthate lincike kwiimeko eziliqela. Ngokomzekelo, ukuthengwa kumthengisi wendawo yokuzivocavoca kwindleko kunokubiza kakhulu kunokuthenga ngqo kwivenkile ye-intanethi. Ngaphandle koko, ngamnye umenzi unetengiso yexabiso.
Kwinqanaba eliphakathi, i-10ml isibalo seTren E ixabisa phakathi kwe-$ 75 kunye ne-130 ye-200mg.
-Thenga iTren E Online
I-Steroids ezithengiswayo kunzima ukuza, ngenxa yemithetho eqinile ye-FDA. Ukuba ungumcebisi kulezi zixhobo zomzimba, akufanele uhlale uthembela onke amabhanki angaphantsi komhlaba afuna ukwenza i-Tren ephezulu. Awufuni ukubeka umngcipheko ngobomi bakho becinga ukuba ezinye zivelisa izixhobo zazo ngokulawulwa kwezinga eliphezulu kwaye akukho migaqo.
Umbuzo olandelayo kwingqondo yakho kufuneka ukuba, "Ndingawuthengaphi na i-steroids yokwakha umzimba?" Ewe, ndiya kucacisa. Ivenkile ye-intanethi ilungelekile kuba igcina ixesha kunye nemali yakho.
Qinisekisa ukuthelekisa amanani e-tanbolone enanthate phakathi kwabathengisi abahlukeneyo, khangela ubungakanani bomthengisi, kunye nokuthuthwa kwempahla. Ngaphandle koko, iwebhusayithi kufuneka inike ingcezu yolwazi olubanzi malunga neTren E. Le ngcaciso ibandakanya izibonelelo, iziphumo zecala le-trenbolone, umyinge kunye nendlela yokulawula iziphumo ezibi.
I-Trenbolone Enanthate Cooking Recipe
Nangona ungathenga umkhiqizo olungele ukuyi-injini, usenokuthenga i-powder yaseTren E eluhlaza kwaye uze nekhasi lakho elifunayo. Le ndlela ayithengi kuphela kodwa yindlela efanelekileyo yokumisela i-Trenbolone enanthate yakho.
I-trenbolone enanthate recipe:
I-100ml kwi-100mg / ml, uya kuyidinga;
10g (7.5ml) ye-Trenbolone E powder
10ml yeBenzyl Benzoate (10%)
2ml ye-benzyl alcohol (2%)
80.5ml yegrapeseed, sesame, okanye ioli yekakhukhunathi
I-100ml kwi-200mg / ml, ufuna;
20g (15ml) ye-Trenbolone E powder
15ml yeBenzyl Benzoate (15%)
I-68ml yeoli (i-sesame, i-grapeseed, okanye ioli yekoncoti)
I-Trenbolone Enanthate iphakathi kwamandla ambalwa i-anabolic steroids ezithengiswayo kwimboni yomzimba. Inyaniso yokuba kunamandla amahlanu ngaphezu kwe testosterone ithetha ukuba le nkunkuma yindawo engabikho ukuya kubafazi. Ngokufanelekileyo, yithatha kuphela ukuba ungumsebenzisi we-steroid onamava.
Xa ucinga ukuba unomyinge obuninzi obomi, qiniseka ukuyisebenzisa xa uhamba ixesha elide. Into ebalulekileyo kukuba ungayisebenzisa kunye nayo nayiphi na i-anabolic steroid ukufezekisa iinjongo ezahlukeneyo. Ufuna ukufumana amandla, ubuninzi, okanye ukunciphisa ubunzima bakho; Tren E uya kwenza.
Ngaba uyazibuza ukuba kutheni i-Trenbolone E powder ibhalela "njengengxaki" ye-anabolic steroid? Eyona nto, kuba i-compound ine-half-life width kwaye iya kuhlala kwinkqubo ixesha elide ngaphambi kokupheliswa. Nangona kukho imicimbi engabonakaliyo, umsebenzisi uya kulahla umthamo, kodwa imiphumo iya kusala kwiiveki ezimbini ezizayo.
I-Isotretinoin e-Raw (i-Accutane) ye-acne: Ukwelapha i-Acne ne-Isotretinoin	I-Oral Strongest Oral Strongest Steroids Methasterone (Superdrol) iPhormone